TIRINTA Timaha IPL
TIRKA TIRADA HOYGA DIODE
808 Laser Diode+Laser Yag
ND YAG LASER TATOO KA BIXIN
S Switch Nd: Yag Laser
1064nm Laser Pulse Long
Dib -u -habaynta Maqaarka
Baxnaaninta daaweynta jirka
Farshaxanka Muruqa HI-EMT
Ultrasound ShockWave EMS
HIFU SMAS Wejiga siilka caatada ah
Mashiinka Joogtada ah ee Raadiyaha
Vacuum Vacuum RF
Mashiinka Diirka Jet
Joogitaanka Sare ee xididdada caarada RF
Qalliinka + Jajabka + Siilka
Dib -u -kicinta Maqaarka ee Kor u Qaadista Wejiga
Mesotherapy -ka Cirbad -la'aanta ah
Rasha rullaluistemadka RF
Ka saarida timaha
WAXQABADKA QAYBTA KALE
IPL Laser Xenon Siraad
Tirtiridda Timaha ee IPL
YAG Laser Handle Tattoo Ka Saarista
CPC Connect Plug iyo Furo
A-Hal Dhismaha Jirka Imtixaanka
WAKHTIGA WAQTIGA DUWAN
Qaadista Wejiga RF Theramge
808+1064+755NM LAASER DIODE
Waa maxay farqiga u dhexeeya ipl oo leh 808nm diode farsamada ka saarista timaha?
OPT IPL Laser Hair Hair Removal VS 808NM Diode laser hair hair removal: Isha iftiinka: IPL (Intense Pulse Light) Isha Fudud: 808nm diode laser laser hair removal Spectral Range: Width Spectral (640-1200nm) & DPL Spectral (610-950nm) Feature: Spectral Daaweynta qashin -qubka ee ka -saarista timaha ...
755+808+1064nm Diode Laser Timaha Ka Saarista
Gacanta ku qalabeysan 3 mowjadood: Alex 755nm, xawaaraha 808nm iyo long.pulse1064nm 755nm: Wax ku ool u ah timaha cad, timaha wanaagsan Xawaaraha 808nm: Dhererka dahabka ee dahabka ah ee dhammaan noocyada timaha
Wakiilka Israel ee Dhawaan Saxiixay ee LED LIGHT Photodynamic Therapy Device - Amarka Koowaad ee 100 Cutub
Aan duulaan ahayn. Way fududahay in la shaqeeyo. Qaabka nooca 7 -aad 1—625nm Qaabka Casaanka ah 2—415nm Qaabka Buluugga ah 3–520nm Qaabka Cagaaran 4—625nm Casaan + 415nm Qaabka Buluugga ah 5–625nm Casaan + 520nm Qaabka Cagaaran 6—415nm Buluug + 520nm Qaabka Cagaaran 7—625nm Casaan + 415nmBlue + 520nm Xakamaynta Caqliga Cagaaran ...
Ma ogtahay in HIEMT -kii ugu dambeeyay uu leeyahay afar madax oo shaqeeya?
1.Kal iyo laba gacmood oo shaqo ah ayaa lagu xulan karaa rabitaanka 2.Pug-in nooca, naqshadaynta madaxa shaqayntu waa mid ku habboon oo deggan. 3. 4 madax oo shaqeeya, 2 hanldes oo wada shaqeynaya, oo lagu daray madaxyo u shaqeeya gacmaha iyo weylaha, oo u oggolaanaya daaweynta caloosha, badhida, gacmaha iyo bawdada iyo dhisidda muruqa jirka! 4 ....
Shiinaha EM Sculpt HIEMT Jirrada Mashiinka Slimming Body, Soo -saaraha, Zohonice.
HI-EMT (Tababaraha Muruqa Korontada-Xoogga Sare) waa farsamada caafimaadka ee loo isticmaalo daawada bilicsanaanta. Waxay isticmaashaa aag elektromagnetic diirada saaraya oo leh heer xoog leh oo nabdoon. Aagga elektromagnetigga wuxuu si aan caadi ahayn u dhex maraa jirka wuxuuna la falgalaa neerfayaasha matoorka oo markii dambe ...
Sideen u dooran karaa aaladda mashiinka ka -saarista timaha?
J: Marka laga hadlayo qalabka timaha ka qaadista leysarka, dadku sida caadiga ah waxay isbarbar dhigaan doorashada IPL/DIODE Laser. Maxay ku kala duwan yihiin labadan aaladood ee Nidaamka? Sida loo doorto Waxaan isbarbar dhignay labada qalab farsamo ahaan iyo liis ahaan ... Tixraac --- IPL VS DIO ...
Jecelka cusub ee ka saarista tattoo - laser Picosure! Waa maxay laser picosure?
PicoSure waa kii ugu horreeyay ee kaliya ee laxanka bilicsanaanta picosecond -ka adduunka la nadiifiyo. Waxaa loo aqoonsaday inay tahay horumar laga gaaray ka saarista tattoo, PicoSure waxay kaa caawin doontaa inaad si dhakhso leh u gaarto maqaarka cad oo aan lahayn khad. Xitaa midabada khadadka adag sida buluugga iyo cagaarka, iyo sidoo kale tre hore ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya ipl oo leh 808nm ...
Aragtida ku saabsan Joogtada Raadiyaha ee kor u qaadista maqaarka ...
Daaweynta Finanka Wax -ku -oolka Wax -ku -ool ah Penetra ...
Jimicsiga ka dib, waa inaad qaadataa ka wanaagsan ...
Daloolo Cajiib Ah Oo Dib U Dhimay Maqaarka Caddaynta ...